Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Seranam-piaramanidina Boston-Logan: zotra iraisam-pirenena vaovao
Airlines • Airport • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao farany mikasika ny Netherlands • Vaovao • Vaovao farany momba ny Korea Avaratra • Vaovao Mafana Portugal • Fitaterana • Travel Wire News • Vaovao farany momba ny UK • Etazonia Vaovao Vaovao
Ny ora 24 farany dia nitondra sidina iraisam-pirenena miisa 2 mankany amin'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Boston Logan, noho ny mpiara-miombon'antoka Delta KLM sy Virgin Atlantic - nametraka ny dingana ho an'ny taona fitomboana sy fanitarana ho an'ny Delta any Avaratra Atsinanana.
Delta Air Lines sy ireo mpiara-miasa aminy KLM, Virgin Atlantic, ary Korean Air dia hanolotra fiaingana 149 isan'andro mankany amin'ny toerana 50 mihoatra ny seranam-piaramanidina Boston-Logan amin'ny taona 2019, fiakarana 30 ny fiaingana isan'andro raha ampitahaina amin'ny taona 2018. Anisan'ireo zotra vaovao Amsterdam, London-Heathrow, Lisbon, Edinburgh, ary Seoul.
Tamin'ny 31 martsa, nanomboka nanidina teo anelanelan'ny Boston sy Amsterdam ny KLM, nanampy ny sidina roa isan'andro mankany Amsterdam izay efa niasa tao amin'ny Seranam-piaramanidina Logan avy amin'ny Delta. Ny talen'ny seranam-piaramanidina KLM Pieter Elbers dia nanatevin-daharana ireo tompon'andraikitra avy ao Massport, mpitarika Delta, mpanjifa ary mpiasa ao amin'ny seranam-piara-manidina amin'ny lanonana fanapahana fantsona mialoha ny sidina ivelany mamaky ny Atlantika.
Atlantika virjiny - London-Heathrow
Ary ny 1 aprily, ny Virgin Atlantic dia nandefa ny fotoam-panompoany antoandro avy any Boston ka hatrany London-Heathrow - fiaingana maraina izay ahafahana mamokatra bebe kokoa amin'ny andro fiasana miasa ho an'ireo mpandeha raharaham-barotra any London. Virgin sy Delta miaraka dia manolotra sidina telo isan'andro mankany amin'ny seranam-piaramanidina Heathrow avy any Boston.
Delta - Lisbon sy Edinburgh
Aorian'ity lohataona ity, ny Delta dia hanomboka ny serivisy ho an'ny vanim-potoana i Boston ho any Lisbon sy Edinburgh, hamakivaky ny sotasota misy ny tanjona iraisam-pirenena vaovao izao izay azon'ny mpanjifan'i Boston mivantana. Amin'ny alàlan'ity vanim-potoana fahavaratra mankany Dublin ity dia ny May Delta sy ireo mpiara-miombon'antoka aminy no hanolotra ny toerana iraisampirenena indrindra avy any Boston miaraka amin'ny sidina hatrany amin'ny toerana iraisampirenena 19 - betsaka noho ny teo aloha.
Mpiara-miasa fahatelo, Korean Air, dia hanomboka serivisy vaovao any Boston amin'ny 12 aprily, rehefa manomboka sidina tsy miato mankany Seoul, iray amin'ireo fanampiana voalohany ho an'ny tambajotra iraisan'ny fiaraha-miasa hatramin'ny nanombohan'ny Delta sy ny Korean Air ny fiarahan'izy ireo tamin'ny volana Mey lasa teo.
Ity sidina vaovao any Boston ity dia tonga satria ny Delta dia manohy manamafy ny toerany amin'ny maha mpitantana azy ao an-tanàna ary mampitombo ny fampiasam-bolany ao amin'ny Logan Airport sy amin'ny vondrom-piarahamonina lehibe any Boston. Amin'ny ankapobeny, ny zotram-piaramanidina sy ireo mpiara-miasa aminy dia hanolotra hatramin'ny 149 fiaingana isan'andro mankany amin'ny toerana 50 mihoatra ny 2019 avy any Logan amin'ny taona 30, fitomboan'ny fizotran'ny 2018 isan'andro raha oharina amin'ny XNUMX.
Ny Delta dia nampitombo avo roa heny ny fiaingana isan-tokantrano avy any Boston nanomboka ny taona 2013 ary amin'ity taona ity dia hanompo toerana efatra fanampiny - Cleveland, Chicago, Washington-Reagan, ary Newark-Liberty - sady mbola manampy fatra hafa koa amin'ny tsena anatiny fito lehibe hafa. Amin'ny ankapobeny, ny zotram-piaramanidina sy ireo mpiara-miasa aminy dia hanolotra hatramin'ny 149 fiaingana isan'andro mankany amin'ny toerana 50 mihoatra ny 2019 avy any Logan amin'ny taona 30, fitomboan'ny fizotran'ny 2018 isan'andro raha oharina amin'ny XNUMX.
Ankoatry ny fitomboan'ny tambajotran'i Delta dia mampiasa vola amin'ny fomba hafa ihany koa ny zotram-piaramanidina. Miaraka amin'ny fiaraha-miasan'i Massport, Delta dia mikasa ny hiasa amin'ny vavahady rehetra ao amin'ny Terminal A Logan amin'ny telovolana fahatelo amin'ny 2019, mampitombo ny dian-tongotry ny seranam-piaramanidiny amin'ny vavahady dimy. Delta koa dia mikasa amin'ny taona 2020 ny fanitarana ny iray amin'ireo Club de Delta Skys ao aminy, ao anatin'izany ny fandroana vaovao, ny fipetrahana miparitaka ary ny faritra misy sakafo sy zava-pisotro misy sary an-tsaina.